(Selaah) kaas oo wax walbaba laga helayaa. wajiga cad ee qorraxda runta ah, oo hadda lagu qariyey weel dahab ah oo iftiin leh, oo aan arki karno kan runta ah, oo aan waajibkayaga oo dhan samayno, annagoo ku soconna safarkayaga quduuska ah.
Joornaalkan waxaa loogu talagalay inuu u keeno dhammaan kuwa aqrin kara boggeeda, Wareemada nafta. Farriinta ninku waa ka sii dheer yahay xayawaan ku jira duudduubyo maro ah - waa ilaah, in kasta oo ilaahnimadiisa ay duuduub tahay, kuna qarsoon tahay xuubyada jidhka. Bini’aadamku shil kuma dhasho dhalasho mana aha ciyaar wanaag. Isagu waa awood, abuuraha iyo baabi'inta masiirka. Isaga oo adeegsanaya awoodda dhexdeeda, wuxuu ka gudbi doonaa xaqdarro, wuxuu ka sarrayn doonaa jaahilnimada, wuxuuna geli doonaa boqortooyada xigmadda. Halkaas ayuu ku dareemi doonaa jacayl dhammaan waxa nool. Wuxuu ahaan doonaa xoog daa'im ah oo wanaagga u wanaagsan.
Farriin geesinimo leh tan. Qaarna waxay umuuqataa meel aan ka jirin adduunkan mashquulka ah ee isbedelka, jahwareerka, kala-guurka, hubin la’aanta. Laakiin waxaan rumeysan nahay inay run tahay, oo xoogga runta ayaa ku noolaan doona.
Falsafad casri ah ayaa laga yaabaa inay tidhaahdo, "falsafadihii hore ayaa arintan ka hadlay." Wax alla wixii falsafadoodu waayihii hore odhan jireen, falsafada casriga ahi waxay maskaxda ku daashay fikradaha la bartay, kuwaas oo, ku sii waday khadka maaddada. waxay horseedi doontaa qashin madhan. "Khayaali mala awaal ah", ayuu yiri saynisyahano ku sugan maalkeenna jariimooyinka, isagoo ku guuldareystay inuu arko sababaha keena mala awaalka. Sayniska wuxuu i siiyaa xaqiiqooyin aan wax ugu qaban karo dadka dunidan ku nool. ”Sayniska wax soo saarka ayaa laga yaabaa inuu ka sameeyo dhul daaqsimeed wanaagsan leh, buuro heersare ah, oo magaalooyin waaweyn laga dhiso meesha duurka. Laakiin saynisku kama saari karto sababta xasillooni darrada iyo murugada, jirrooyinka iyo cudurka, kumana qancin karaan nafta nafta. Taa baddalkeeda, sayniska sayniska ahi wuxuu baabi'iyaa nafta, wuxuuna adduunka oo dhan ku xalliyaa tuulmo ciid ah. Fiqiga, ayuu yiri fiqiga, isagoo ka fekeraya aaminaadiisa gaarka ah, “wuxuu nafta u keenaa farriin nabadeed iyo farxad.” Diimaha ilaa iyo hadda, waxay maskaxdu xidheen; Oo nin nin ka gees ah dagaalka nolosha. dhulka ku daadshay dhiig ku daadanaya allabaryo diimeed iyo dagaallo ku faafay. Marka la eego dariiqa ay u leedahay, fiqiga ayaa ka dhigi doonta kuwa raacsan, kuwa sanam caabuda, waxay gelineysaa Awood darrada qaab waxayna ku abaalmarisaa daciifnimada aadanaha.
Weli falsafadda, sayniska, iyo diinta ayaa ah kalkaaliyeyaasha caafimaadka, macallimiinta, xorriyadda nafta. Falsafada waa dhaxalka bini aadamka kasta; waa jacaylka iyo doonista maskaxda si loo furfuro loona helo xigmad. Cilmiga sayniska wuxuu bartaa inuu la xiriiro waxyaabaha midba midka kale, iyo inuu siiyo meelaha ay ku habboon yihiin ee adduunka. Diinta dhexdeeda, maskaxdu waxay ka xorreysaa silsilado xasaasi ah oo waxay ku mideysan tahay Jiritaanka aan dhamaadka lahayn.
Mustaqbalka, falsafada ayaa noqon doonta in kabadan jimicsi maskaxeed, saynisku wuxuu ka badnaan doonaa waxyaalaha, iyo diinta ayaa noqonaysa mid aan cilmi ku dhisnayn. Mustaqbalka, ninku wuxuu u dhaqmi doonaa si caddaalad ah wuxuuna u jeclaan doonaa walaalkiis sida naftiisa, ma ahan sababtoo ah wuxuu u rajeynayaa abaalmarin, ama wuxuu ka baqayaa dabka jahannamada, ama qawaaniinta dadka: laakiin maxaa yeelay wuxuu ogaan doonaa inuu ka mid yahay saaxiibkiis, inuu saaxiibbadiisuna waa isku wada mid, oo isku wada midna waa: kan isagu ma dhaawici karo mid kale isagoon is dhaawicin.
Halganka jiritaanka adduunyada, ragga ayaa ku tuman doona midba midka kale dadaalkooda si loo gaaro guul. Markay ku gaadheen qiimaha silica iyo silica, iyagu wali kuma qanacsana. Iyaga oo raadinaya wax macquul ah, waxay eryayaan qaab hadhsan. Gacantooda, way libaysaa.
Rabitaanka iyo jaahilnimada ayaa nolosha ka dhigaya riyo cad oo dhulkuna yahay cadaab oo xumaada. Oohinta xanuunku waxay la mid noqotaa qosolkii khaniisiinta. Qulqulo farxad ayaa ku xigta daadashada murugada. Dadku waxay isku duuduubaan oo isku dhegaan sababaha murugadiisa, xitaa inta ayaga hoos loo dhigay. Cudur, oo ah dhimashada dhimashada, waxay ku dhacdaa maqaarkiisa. Dabadeed waxaa la maqlaa fariinta nafta. Warkani waa xoog, jacayl, iyo nabad. Tani waa farriinta aan keeni doonno: xoogga maskaxda looga xoreeyo jahliga, nacaybka, iyo khiyaanada; geesinimada si ay runta u raadsadaan nooc kasta; jacaylka midkiinba midka kale culaabta ha u qaado; nabada ku timaada maskaxda xorta ah, qalbi furan, iyo miyirka nolosha aan dhammaanayn.
Dhamaan kuwa helaa farriintaas ha ku dhaafo. Midkasta oo leh "Ereyga" wax uu siiyo oo ka faa'iideysan doona kuwa kale ayaa lagu casuumay inay wax ku soo kordhiyaan boggeeda.